Booliska Itoobiya oo Addis Ababa ku qabtay hub iyo dhar ciidan & 5 ruux oo lala xiriirinayo (SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Booliska Itoobiya oo Addis Ababa ku qabtay hub iyo dhar ciidan &...
Booliska Itoobiya oo Addis Ababa ku qabtay hub iyo dhar ciidan & 5 ruux oo lala xiriirinayo (SAWIRRO)
Addis Ababa (Halqaran.com) – Komishinka Booliska ismaamulka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay hub iyo dhar ciidan oo sharci darra ah in lagu qabtay bakhaar uu shaqsi leeyahay oo ku yaalla magaalada Addis Ababa.
Booliska waxay sheegeen dharka ciidanka ee la qabtay iney isugu jiraan kuwa ciidamada qalbaka sida iyo kuwa booliska oo deegaanna kala duwan ka kooban.
Sidoo kale waxaa bakhaarkaasi lagu qabtay hub iyo qalab militari oo ka mamnuuc ah inuu shacab gacantii uu ku jiro.
Waxay booliska Addis Ababa gacanta ku soo dhageen 5 qof oo lala xiriiriyey hubka iyo dharka ciidan ee la helay iney ku lug leeyihiin.
Booliska Itoobiya oo Addis Ababa ku qabtay hub iyo dhar ciidan